Cop 21-Madagasikara : hamboly hazo 40.000 ha | NewsMada
Cop 21-Madagasikara : hamboly hazo 40.000 ha
Nilaza ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny ala ary ny ekolojia fa anisan’ny hahazo tombontsoa amin’ny fanapahan-kevitra tamin’ny Cop 21 natao tany Paris, ny volana desambra teo i Madagasikara. Tanjona ny hampihenana -2°C ny hafanan’ny tany, ka ao anatin’izany ny hifantohana amin’ny famokarana sy fampiasana angovo azo ahodina. Manodidina ny 90 tapitrisa dolara ny ho famatsiam-bolan’ny banky iraisam-pirenena. Anisan’ny hampiasana io vola io ny hambolen-kazo amina velaran-tany 35.000 ha hatramin’ny 40.000 ha.
Paikady ho vahaolana amin’ny fampihenana ny entona manimba ny tontolo iainana, na « Gaz à effet de serre » (GES) koa ny fivarotana entona karbona, avy amin’ireo ala mikitroka aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, toa an’i Madagasikara amin’ireo firenena tena mpandoto ny tontolo iainana sy mpanaparitaka ny GES.
Ho an’ity farany, fanambin’ireo firenena vaventy sy indostrialy tena mpandoto, toa an’i Sina, ny hampihenana 30% ny fanapariahany GES. Amin’ny fampihenana ny famokarana indostria miankina amin’ny angovo avy any ambanin’ny tany (solika sy arintany). Fanambin’i Madagasikara ny hampihenana 14% izany.
Mitentina 100 tapitrisa dolara ny toky nomen’ny firenen-dehibe hanatanterahana ny paikadin’ny Cop 21, 2016-2020.